नयाँ, उत्कृष्ट र उज्ज्वल भविष्य मात्र खोजिरहेका आममानिसलाई निराश पार्दै सपनावादीहरूले जनताले नसोचेको र नचाहेको गर्न तम्सिने, आलोचना सुन्नासाथ विगत सरकारले गरेको भन्दै पन्छिने काइदा झनै दुःखदायी मान्नुपर्छ । गिरिजाबाबु, डाक्टर भट्टराई, सुशील’दा वा अमूक नेताले गरेको काम अहिले किन गर्न नहुने ? भन्ने अकल्पनीय प्रश्नले सिंहदरबार पुरानो विरासतलाई छोड्न चाहँदैन । विगतका कमजोरी छोड्न नचाहने, मुलुकको पहिचान भत्काउन लागेका अनेक अदृश्य शक्तिबाट सुनियोजित रूपमा प्रयोग हुँदा निकट भविष्यमा जन्मने धार्मिक द्वन्द्वलाई देख्न चाहँदैन । मुलुकको धर्म, परम्परा, संस्कृति, विशेषतालाई विकासको बाधक देख्ने नेपाली वाम–आन्दोलनले आफ्ना पुर्खाको उत्कृष्टतालाई कमजोरी देख्न पुग्यो । आफ्ना कमजोरीलाई पुर्खा र धर्मको कमजोरी देख्ने आँखाले तिनै पुर्खाको कमाई र विरासतलाई बेच्दै पेट भर्ने र कुर्सी ताक्ने माध्यम मुलुक निर्माणको अधोगतिको कारण बन्न पुगेको बिस्तारै खुल्दै छ । अहिलेकै जस्ता पुर्खा पहिला हुन्थे भने वर्तमानका नेताहरूलाई इसाईले ‘विभीषण’ बनाउन डलर युरो खर्च गर्नुपर्ने थिएन । धर्म, संस्कृति र परम्परा कमजोर बनाएको पुरस्कारस्वरूप प्राप्त गर्ने खर्चपानीकै निम्ति पूर्वएमालेको विदेश विभागप्रमुख बन्न लालायित नेताहरूको दैनिकी कसरी गुज्रेको थियो ? लुक्ने विषय अब रहेन ।